SP-G38 120ml လက်လုပ်ဖန်ထည် Ultrasonic အနံ့ပျံ့, တရုတ် SP-G38 120ml လက်လုပ်ဖန်ခွက် Ultrasonic အနံ့ပျံ့ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ - Sunpai Industries Limited
120ml လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Glass Ultrasonic Aroma Diffuser
၁.၇ အရောင်ရှိသော LED Lights ပြောင်းလဲခြင်း - မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့နှံ့ခြင်းသည်သင်၏ကလေး၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းကို 1.7 ပြောင်းလဲခြင်း Mood Lights ဖြင့်ဖြစ်စေသည်။ တစ်ခုချင်းစီသည် Bright နှင့် Dim mode အကြားညှိနှိုင်းနိုင်သောအရောင်တည်ငြိမ်နိုင်သည်။ အိပ်ရာဝင်ချိန်တွင်မှောင်မိုက်။ ကြောက်လန့်သောကလေးများအတွက်ကြီးစွာသောအလင်းသည် ၇ အလင်းရောင်၏အရောင် (အဖြူ၊ ပန်း၊ လိမ္မော်၊ အဝါ၊ အစိမ်း၊ အပြာ၊ ခရမ်းရောင်) ကိုတဖြည်းဖြည်းစက်လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်တစ်ရောင်တည်းပုံသေ mode အကြားညှိနိုင်သည်။
2. Diffuser / Humidifier / Night Light - သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောရေနံများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးလေကိုစိုစွတ်စေသည့်အခါမွှေးကြိုင်သောပျံ့နှံ့မှုကိုခံစားပါ။ ဒါ့အပြင်သူကအစိုဓာတ်ကိုထပ်ထည့်ရန်ဆီမပါသောစိုထိုင်းဆအဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Romantic ၇ ရောင်အရောင်ရှိသော LED မီးများသည်သင့်ကလေး၏စိတ်ကူးကိုဖန်တီးပေးသည်။ အရောင် (၇) ခုသည် ၄ ​​င်း၏ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်အရောင်တစ်မျိုးတည်းဖြင့်လည်ပတ်သည်။
3. အရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများ - အပြင်ဘက်တွင်ထူးခြားသောအထူးဖန်သားပြင်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးလိုအပ်သောရေနံပျံ့နှံ့မှုများကိုရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်မြင့်မားသောအဆင့်မြင့်၊ လုံခြုံစိတ်ချရသော၊ နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတို့ဖြစ်သည်။
4.PORTABLE: မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများအတွက်ပျံ့နှံ့အသေးစားနှင့်လက်ရာမြောက်သောအရွယ်အစားဝါကြွားတတ်။ နေရာသိပ်မယူပဲအိပ်နေစဉ်၊ အလုပ်လုပ်နေစဉ် / ဖတ်နေစဉ်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စားပွဲပေါ်တွင်နေရာအလွယ်တကူရနိုင်သည်။ အိတ်ဆောင်ဒီဇိုင်းကဒီအသေးစား humidifier ကိုမွှေးကြိုင်သောခရီးတစ်ခုစတင်ရန်သင်၏ခရီးဆောင်အိတ်ထဲတွင်အလွယ်တကူထုပ်ပိုးနိုင်သည်။
5.PERFECT GIFT IDEAS ရေရေကုန်သောအခါရေဖြန့်စက်သည်အလိုအလျောက်ပိတ်သွားသည်။ ဤအနံ့ပျံ့နှံ့မှုသည်သင်၏လေ့လာမှု၊ အလုပ်၊ အိမ်၊ ယောဂ၊ အိပ်ခန်း၊ ရုံးခန်းစသည်တို့အတွက်သင့်လျော်သည်။ ရနံ့ကုထုံးကိုမြတ်နိုးသောသို့မဟုတ်ရနံ့ကုထုံးဖြင့်ကုသခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးရနိုင်သောမိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်အကြံဥာဏ်။
မြူခိုး Volume ကို 15-30ml / h
ယူနစ်အရွယ်အစား .9.4 * 21.2cm
အရောင်သေတ္တာအရွယ်အစား 14.6 * 14.6 * 27.2cm
SP-G02 100ml လူကြိုက်များသောကြွေအနံ့ပျံ့နှံ့မှု